In ka badan 32-kun oo Arday oo maanta galaysa Imtixaanka…
Wasaaradda Waxbarashada XFS ayaa maanta imtixaan ka qaadeysa in ka badan 32-kun oo Arday oo ku kala sugan Gobolka Banaadir, Hir-Shabeelle, Koofur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug.
Ardaydaan ayaa galeysa Imtixaanka fasalka ugu dambeeya Dugsiga sare (Fasalka 12), Waxaana ay dib ugu soo bililiqeysteen waqti sanadeedkii laga qaadi jiray oo ku beegneed bishii May, sabab la xiriirta hakinta Waxbarashada Cudurka Covid-19.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta sare XFS Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa Ardayda u rajeeyay in ay natiijo wanaagsan ka helaan Imtixaanka Wasaaradda ee Maanta u bilaabanaya.
“Anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca Waalidiinta Soomaaliyeed, waxaa dhammaan ubaxa Soomaaliyeed ee imtixaanka Qaranka u fadhiisaneysa u rajeynaynaa guul iyo natiijo ay ku farxaan. Waxaa tihiin rajada dalka iyo dadka Soomaaliyeed, waxaan rajeynayaa muraayadda nalaga eegayo in ay qurux badnaan doonto” Sidaasi waxaa yiri Wasiir Goodax oo qoraal soo dhigay Bartiisa Facebook.
Wasiirka ayaa Ardayda ugu baaqay in ay tix-geliyaan awaamiirta cusub ee looga hortagayo faafitaanka Cudurka Covid-19, sida in ay Afka iyo Sanka xirtaan, isla markaana ay kala fogaadaan si loo yareeyo faafitaanka Coronavirus.
Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta sare XFS ayaa todobaadkii hore qaaday Imtixaanka fasalka 8-aad ee Dugsiga dhexe, waxaana maanta Ardayda Imtixaanka Dugsiga sare ku galayaan Goobo kale oo loo diyaariyay.